Sheeko Xikmad Leh: Dadaalaa Waa Gaaraa | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Yaxye Yaasiin Xasan — June 16, 2019
Ardey caajisloow ah, habeenkiina dhafri jiray, ayaa maalin maalmaha kamid ah, waxa uu kasoo qeyb galay, muxaadaro kasocoty jaamacad, taasoo macalinku uu ku sharaxayey cilmiga xisaabta iyo dhibaatada laga maro barashadiisa. Ardeygii ayaa fasalkii ku dhex hurday ayadoo muxaadaraadii socoto, waxa uuna soo toosay ayadoo fasalkii lagu kala dareerayo, durbadiiba inuu baxo ayuu bilaabay, balse wuxuu eegay sabuurada, wuxuuna arkay qoraal xisaabeed aad u fara badan oo ku xardhan sabuurada.
Ardeygii ayaa fasalka kusoo noqday, waxa uuna bilaabay inuu min guuriyo wixi sabuurada ku qornaa, isagoo buugiisa ku qoronaya, waxa uuna naftiisa ka dhaadhiciyey in waxani yihiin, waajib ama shaqo guri oo loo diray ardeyda si ay usoo xaliyaan. Ardeygii ayaa guriga la aaday qoraalkii badnaa, ee soo miin guuriyey, waxa uuna guda galay in uu xal u helo dhowr su,aalood oo aad u adkaa, isagoo waxbadan waqti ku lumiyey matbacadaha iyo buugaag aqrinta.
Ugu dambeyn dadaal dheer kadib waxa usuura gashay inuu xal usoo helo su,aalihii. waxa uuna kusoo laabtay jaamicadii isagoo doonayey inuu soo gudbiyo wixii uu kasoo shaqeeyey. Macalinkii ayaase yiri: Su,aalaha sabuurada ku qornaa ma aysan ahayn shaqo guri(home work), mana amrin ardeyda in ay kasoo shaqeeyaan, ee maxaa adiga kugu kalifay in aad kasoo shaqeyso?
Ardey ayaa yiri: Ya Allah, waqti badan iyo dhafar badan ayaan u galay in aan xal u helo, adigana waxaa leedahay shaqo laguu diray ma ahan. Macalinkii ayaa yiri: Su’aalaha sabuurada ku qornaa, waxey ahaayeen qaar ka mid ah tusaalooyin aan ardeyda siinayey, tusaalooyinkaasna waxey ka mid yihiin su,aalihii ay ka cajiseen ama xal u waayeen culimadii ugu weynaa ee cilmiga xisaabta. Ardeygii ayaa yaabay, waxa uuna yiri: Macalin anigaaba xal usoo helay, waxa ay culimadu ka caajiseene. Kadib markii la xaqiijiyey, daraasado badana lagu sameeyey ayaa la ogaaday in ardeygaasi uu si sax ah u xaliyey mas,alado boqolaal sano xal loo weysanaa oo cilmiga xisaabta ah. Hadiise uu soo jeedi lahaa ardeygaasi wuxuu aamini lahaa in su,aalahani yihiin mustaxiil xal u helistoodu, mana uusan isku howleen baarista iyo maskax adeegsiga.
Tags: Sheeko Xikmad Leh: Dadaalaa Waa Gaaraa
Next post Sheeko Xikmad Leh: Halganka
Previous post Sirta Guusha Ee Dale Carnegie
Waa qoraa ka tirsan Tuke Somalism. Qoraagga ayaa qoray buuggaag kala duwan sida buugga Baadigoobka Guusha, Wahsi Tire iyo iyo qoraalo kale oo badan. Qoraagga waa aqoonyahaan cilmiga xanaanada xoolaha. Waa aqoonyahaan Soomaaliyeed oo aad u xiiseeya wax qorista. Qoraaladda qaarkiisa uu qoraaggaan leeyahay waxaad ka heli kartaa Tuke Somalism.